SIDA LOO QUUDIYO GERANIUM FOR UBAX BADAN EE GURIGA: SIDA LOO SAMEEYO SI HABBOON, HABKA IYO XEERARKA AASAASIGA AH EE BACRIMINTA - DHIRTA GUDAHA
Sida loo quudiyo germanyum ee ubax badan ee guriga
Geranium ama pelargonium wuxuu aqbalaa milkiilaha leh ubax joogto ah, sidaas darteed waxaa badanaa laga heli karaa on daaqadaha ee bannaanka u badan. Wixii dhirta ubax joogto ah waxay u baahan yihiin in ay abaabulaan daryeelka saxda ah, iyo mid ka mid ah xaaladaha ugu muhiimsan waa quudinta nafaqooyinka Geranium.
Maqaalkani waxaan eegaynaa noocyada Bacriminta loo baahan yahay ubaxa, xeerarka codsigooda iyo talooyinka guud ee daryeelidda dhirta.
Waa maxay dharka ugu sarreeya
Wixii horumarinta caadiga ah iyo dhirta ubaxyada badani waxay u baahan yihiin nafaqooyin, laakiin xitaa carrada bacrin ah ayaa la gooyaa gudaha 2-3 bilood kadib beerashada.
Ubaxyada gudaha ma awoodaan in ay nafaqooyin ka helaan ilaha dabiiciga ah, maadaama ay ku koraan dheryihii, sidaas darteed, marka korriinka jinsiga lagu koriyo, waxaad u baahan tahay inaad marmar ku darto bacrimin - kakooban oo ah Bacriminta oo ka kooban minerals, fitamiino iyo nafaqo baahida dhirta.
Nidaamkani wuxuu ka hortagayaa dhoobada ciidda dheriga dhirta iyo saameyn togan ku leh horumarinta ubaxa.
Ma taqaanaa? Magaca ubaxa wuxuu ka yimid erayga Giriigga "geranos" iyo tarjumaadda macnaheedu waa "crane".
Dharka ugu sarreeya wuxuu noqon karaa:
joogto ah - Waxaa loo sameeyey si waafaqsan jadwalka si loo ilaaliyo dheelitirka nafaqooyinka ee ciidda inta lagu jiro wejiyada kala duwan ee wareegga nolosha ubaxa;
degdeg ah - waxaa la keenay dhacdada in ubaxa ay muujinayso calaamadaha yaraanta hal ama dhowr maaddooyin lagama maarmaan ah.
Kaliya ee ciidda lagu kobciyo maaddooyinka lagama maarmaanka ah, geranium wuxuu ilaalin doonaa muuqaal caafimaad leh wuxuuna si joogto ah ugu raaxeeyaa ubaxyo dhalaalaya oo waaweyn.
Noocyada daryeelka ee geraniums
Sida geedka indoor-ka ah, geranium wuxuu u baahan yahay daryeel. Ubaxa uma baahna shuruudo gaar ah oo sii kordhaya, laakiin shuruudaha ugu yar ee daryeesha waxaa lagu talinayaa in la ilaaliyo.
Liiska liiska xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka xanaanada waxaa lagu soo bandhigay hoos:
dheriga ah ee geraniums waa in la dhigaa furan, geedka u baahan yahay badan oo qorraxda;
Heerkulka hawada lagu taliyay ee qolka waa laga bilaabo +12 ilaa + 20 ° S (laakiin aan ka yareyn + 10 ° S);
Pelargonium waa in si badan loo waraabiyo, laakiin ma badana, lakiin ma lagu buufin karaa;
dheriyada leh godadka dheecaanka ee hoose ee loo isticmaalo si ay u koraan ubaxa;
Geraniums waxay u baahan yihiin helitaanka hawo cusub, laakiin ma aad ku sii hayn karto qabyo-qorid;
Wixii ubax ah, geedka waxaa lagu koray ciidda bacrin ah iyo si joogto ah loo quudiyo;
waxaa lagama maarmaan ah in muddo go'an la gooyo caleemo qoyan iyo inflorescences si loo ilaaliyo muuqaalka qurxinta ee dhirta oo siinaya xoog si ay u sameeyaan burooyinkoodii cusub.
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida loo isticmaalo yuraaniyamka ujeedooyinka daawooyinka.
Xeerarka guud ee quudinta
Way adagtahay in la sameeyo dhar-dhaqashada ubaxa, laakiin xad-dhaafka khaladka ah ama qaladaadka ee tiknoolajiyaddeeda waxay waxyeelayn kartaa dhirta, Sidaa darteed, marka bacarimiso for geranium, waxaa lagu talinayaa in la raaco xeerarka guud:
haddii germanyum uu ku jiro kulaylka wakhti dheer, ka hor intaan la quudin waa in loo wareejiyaa hooska ugu yaraan saacad;
1 saac ka hor inta aadan uur qaadin, geedka waa in la waraabiyaa si looga fogaado xidid gubasho;
waxaa suurtogal ah in lagu quudiyo ubax laga bilaabo May ilaa September, tan iyo xilliga dayrta iyo jiilaalka waa nasasho;
Bacriminta aan la isticmaali karin inta lagu jiro cudurada dhirta; marka hore, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo sababta cudurku u bogsanayo;
ka dib markii aad dalbato dharka ugu sareeya, waxaa lagu talinayaa in la daboolo dusha ciidda si aad u wanaagsan u neefsan karto;
siinta quudinta pelargonium yaryar waxay u baahan tahay inay isticmaasho nus nus oo ah bacriminta;
inta jeer ee codsashada dharka sare waxay kuxirantahay nooca dharka sare iyo kala duwanaanta 7 ilaa 20 maalmood.
Waa muhiim! Wixii diyaarinta xal aqueous ah ee Bacriminta, waxaa lagu talinayaa in ay isticmaalaan biyo diirran (ugu yaraan + 20 ° C) si ay maaddadu ufududo in ka fiican.
Sidee iyo waxa la rabo in lagu quudiyo germanyum ee ubax badan ee guriga
Si pelargonium si aad u badan ubax, iyo Bacriminta yihiin faa'iido, waxay u baahan yihiin in lagu isticmaalo sida waafaqsan xeerarka qaarkood. First of dhan, waxaa muhiim ah in la go'aamiyo sida loo siiyo biyaha ubaxa, iyo in la ogaado inta jeer ee codsiga dharka ugu sareeya.
Wixii ubax joogto ah, dhirta u baahan tahay macdanta, fitamiinnada iyo qaddar yar oo ah arrin organic.
Video: dharka geedka Geranium ee ubaxa
Ka fikir tiknoolijiyada quudinta:
Potassium iyo fosfooraska ayaa ah qodobbada muhiimka ah ee abuuritaanka guusha. Waxay u baahan yihiin in lagu daro biyaha loogu talagalay waraabinta ubaxa, waxayna sameeyaan 14-kii maalmoodba mar.
Si loo gaaro ubax pelargonium xilliga qaboobaha, waxaa la waraabiyaa heteroauxin ama xal glucose 7da maalmoodba mar.
Markaad isticmaasho Bacriminta dabiiciga ah waxay ku kala yaallaan biyaha waxayna codsadeen wax aan ka badneyn hal mar seddexdii usbuucba mar.
Wixii dhirta ubax qurux badan u baahan yihiin inay sameeyaan fitamiin B1, B6, B12. Waxaa laga iibsadaa ampoules waxaana lagu kala diraa biyo (2 litir oo biyo ah oo ah 1 ampoule). Pelargonium ayaa lagu shubay xalka 3 asbuuc walba, fiitamiinada kale ee isku dhafan.
Ka feker faahfaahin dheeraad ah nooca bacriminta ku haboon yahay germanyum, iyo xeerarka ku-meel-gaadhka.
Akhriso sidoo kale marka ay ka fiican tahay in la gooyo geranium guriga.
Xeryaha dabiiciga ah waxay keeni karaan xididdada gubanaysa ee pelargonium, markaa waxaa lagu talinayaa in laga saaro. Laakiin waa la ogol yahay in la isticmaalo noocyada Bacriminta noocan oo kale ah oo ah qadar ugu yar oo leh xoogaa daciif ah.
Talooyinka ugu muhiimsan ee ku saabsan samaynta organikada hoos ku qoran:
siinta quudinta waxaad isticmaali kartaa dhibco digaag ah oo lagu qasi karo biyaha oo ah saamiga 1:20;
Waxaad ku daadin kartaa geranium leh xal daciif ah digada lo'da (10 litir oo biyo ah ayaa looga baahan yahay 1 l oo digada);
sidaa daraadeed ma jiraan wax gubasho ah ee xididdada Pelargonium, waa lagama maarmaan in la isticmaalo digada si fiican oo qallalan iyo qashin.
Si aad u bacrimiso ubax, waxaad isticmaali kartaa oo kaliya mid ka mid ah noocyada liiska ku qoran ee arrinka organic.
Si pelargonium ku faraxsan ubax joogto ah iyo jilicsan, waxay u baahan tahay macdanta dheeraadka ah. Bacriminta ugu fiican ee Geranium - diyaarinno-diyaariyey ee nafaqooyinka for houseplants, sida ay ku jiraan dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah.
Ma taqaanaa? Karaaca cayayaanka ee waxyeellada firfircooni waxay si toos ah ugu celisaa baraha. Si looga hortago cayayaankaan, waa ku filan in la dhigo ubaxyo dhowr ah oo dhir ah oo lagu duudduubay baco ku jira xabo dhar leh.
Qaybaha ugu muhiimsan ee ay tahay in ay ku jiraan qayb quudinta waa:
nitrogen - lagama maarmaanka u ah dhirta yaryar si ay u kiciyaan koritaanka cagaarshow tiro badan iyo kuwa qaangaarka ah ee ka dambeeya manjooyin guga la qorsheeyey. Ka hor inta aan la bilaabin ubax, xaddiga nitrogen ee dharka ugu sareeya waxaa lagula talinayaa in la yareeyo si aysan dhirtu u isticmaalin xooggeeda oo kaliya koritaanka caleemaha;
fosoorka - wuxuu kiciyaa ubaxyada pelargonium iyo sameynta burooyinkeeda;
potassium - wuxuu leeyahay saameyn xoog leh, wuxuu ku kordhiyaa ubaxyada dheer ee geraniums. Qadarka potassium ee quudinta waxaa lagu talinayaa in la kordhiyo ka hor ubax;
magnesium sulfate - Waxay kicisaa abuuritaanka burooyinkeeda cusub;
kalsiyum - xoojiyaa dhirta, waxay ka dhigtaa afkoda oo ka baxaysa cufan;
birta - waxay ku kordhinaysaa sawir-qaadashada caadiga ah, waxay haysaa midabka cufan ee caleemaha;
zinc - wuxuu ka qayb qaataa sawir qaadista, waxaa lagama maarmaan u ah horumarinta caadiga ah ee ubaxa;
boron - Waxay kicisaa ubaxyada iyo kobcinta cayayaanka.
Markaad isticmaasho bacriminshiyaha guud, waa inaad si cad u raacdaa tilmaamaha loogu talagalay diyaarinta ee ku qoran baakadka.
Marka lagu daro Bacriminta la iibsaday, daaweynta dadweynaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu quudiyo pelargonium ubax. Isla mar ahaantaana daryeelka waa in la qaato iyo qiyaasaha lagu taliyey ee qaybaha si aan u waxyeeleynin ubaxa.
Daawooyinka dadweynaha loo isticmaalo bacarimiso pelargonium, iyo sifooyinka isticmaalka ayaa hoos ku taxan:
Iodine. Si aad u kariso, waxaad u baahan tahay inaad kala gooyo 1 dhibicda 1 litir oo biyo ah. Hal qiyaas oo bacriminta ah ee germanyum - 50 g.
Video: quudinta iodine geranium
Caanaha. Waxay ka kooban tahay kalsiyum, magnesium, potassium iyo fosfooraska. 1 litir oo biyo ah, waxaa lagu talinayaa in ay isticmaalaan 100 ml oo caano ah iyo biyo ah germanyum leh xal soojeedin ah 2-3 jeer bishii. Hirgelinta beddelka noocyada quudinta oo kale oo leh waraabinta joogtada ah.
Fuud mooska. Badeecadu waxay u adeegtaa ilaha wanaagsan ee nitrogen. Ka hor inta aanad isticmaalin adigoo rinjiga ku wanaagsan, raaci biyo iyo jarjar yar. Kadibna waxaa lagu aasay ciidda leh pelargonium qoto dheer.
Ash. Waxay ka kooban tahay potassium, zinc, magnesium iyo birta. Si aad u diyaarsato dhar hoose oo aad u baahan tahay inaad ku milayso 1 tbsp. l dhaqaale ahaan 1 litir oo biyo ah. Biyaha la yiraahdo "Geranium" oo leh 10 ilaa 14 maalmood.
Kabaha ukunta. Waxay u adeegtaa ilo wanaagsan oo kalsiyum ah waxaana loo isticmaali karaa sidii lakabka dheecaanka ah marka loo wareejiyo pelargonium si dheri cusub.
Khamiis. Kordhinta horumar firfircoon ee xididada. Wixii bacriminta bacriminta diyaariso xal of 1 litir oo biyo ah, 3 g oo khamiir iyo 2 tbsp. l sonkorta Isku darka soo baxa waxaa la yiraahdaa geranium 1 jeer toddobaadkii.
Aspirin. Waxay ka caawisaa kordhinta iska caabbinta dhirta, waxayna kicisaa abuurista burooyinkeeda. Si aad u quudiso pelargonium leh asbiriin, kala dir 1 kiniin ah 1 litir oo biyo ah iyo ku buufin warshadda leh isku dar ah. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo daaweyntan sidii tallaabo looga hortagi karo cudurada iyo ubax dib loo dhigayo, mudada u dhexeysa daaweynta waa 2 toddobaad.
Waa muhiim! Marka bacarimiso ubax leh xal of aqueous of iodine, waa in lagu shubo oo kaliya darbiga derbiyada dheriga si aanay u gubi xididada.
Xaaladaha qaarkood, shuruucda quudinta pelargonium, oo kor ku qoran, waxay ubaahantahay in la hagaajiyo. Tani waxay inta badan dhacdaa inta lagu guda jiro qeeybta dhirta ama marka muuqaalkeeda uu sii xumaado sababtoo ah xanuun ama daryeel aan habooneyn.
Dheeraad dheeraad ah ee maqaal ah waxaan tixgelinaynaa xeerarka quudinta pelargonium xaaladaha noocaas ah.
Xidid caleemo hurdi ah
Sababta caanka ah ee jaalaha ah ayaa ka baxaya geraniums qolka khaladaadka daryeelka. Si aad u xalisid dhibaatada, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u go'aamiso sababkeeda oo aad u hagaajiso daryeelka ubaxa.
Baro wax badan oo ku saabsan sababaha keena caleemaha jaalaha ah ee geraniums.
Xeerarka bacariminta marka caleemaha warshadu isbedelaan jaalaha ayaa ku xiran xaaladda:
haddii sababta caleemaha hurdi ahi ay tahay waraabin xad dhaaf ah, ka dibna ubaxa waxaa lagu beddelaa dheri cusub oo lagu beddelayo lakabka dheecaanka, ka dibna la quudiyo qadar yar oo ah bacriminta organic iyo xalka glucose;
haddii caleemaha jaale noqdaan jinsiga oo sabab u ah germanyum noqda mid dhaadheer dherigii hore, warshadda waxaa loo wareejiyaa dherer weyn, ka dib markii muddo yar ka dib la waraabiyay xal daciif ah oo iodine ah;
caleemaha waxay noqon karaan jaale ah natiijo ka dhalatay bacriminta macdantamarka dhirta ay gubtay xididada. Xaaladdan oo kale, pelargonium waxaa laga saaraa dheriga, xididdadiisa waxaa lagu dhaqaa biyo socda oo lagu beeray ciid cusub, laakiin Bacriminta macdanta aan la adeegsan. Marka muuqaalka muuqaalka ubaxu soo fiicnaado, waxaad ku dari kartaa dhar yar oo dabiici ah.
Si looga hortago huruuda caleemaha pelargonium, waxaa lagu talinayaa in ay raacaan talooyinka soo socda:
waraabin dhexdhexaad ah;
ka hortagaan qoraalada;
raac shuruucda bacriminta qorshaysan;
waqtigaa ku beddel ubaxa ubax cusub dherer ahaanba marka uu korayo.
Ma taqaanaa? Caleemaha Geranium waxay leeyihiin guryaha bakteeriyada. Waxay muddo dheer la gooyey dhalooyinka macaanka si looga hortago caaryada.
Pelargonium waxaa lagula talinayaa in ay ku koraan ubax yar, laakiin waxay u baahan tahay xubin joogto ah sida xididada koraan.
Waxaa badanaa la sameeyaa sanadkiiba hal mar, laakiin haddii dhirtu ay soo gaarto biyo badan ama waxyeello farsamo, markaa waxa lagu beddelaa xaalad degdeg ah.
Dhexdhexaadiyaha dheriga cusub ma aha in uu ka weyn yahay dhexroorka dherigii hore. Baaxadda weyn ee awoodda, xididdada geranium waxay u koraan si deg deg ah, kicinta koritaanka xad-dhaafka ah ee cagaaran iyo gaabinta formation of burooyinkeeda.
Transplantation waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo wareejiyo pelargonium galay dheri cusub oo leh dhoobo dhoobo ah. Xeerarka codsiyada bacrimin markaad transplanting ubax hoos ku qoran:
2 toddobaad ka hor inta aanad dhicin, ha ku daboolin dharka;
haddii germanyum lagu beddelo ciidda la iibsaday, ka dibna waxaa ku filan in lagu daro magnesium iyo nitrogen oo keliya;
haddii ciidda loogu talagalay transplanting ubax waxaa diyaariyay naftaada, ka dibna barta buuxda ee Bacriminta macdanta ah waa in la hirgeliyaa sidaa darteed at pelargonium site cusub ma laha nafaqooyin;
waxaad isticmaali kartaa Bacriminta granular gran kuwaas oo lagu qaso ciidda oo lagu dhajiyey dheri cusub inta lagu guda jiro xubin ubax ah;
Marka dhammaan talooyinka kor ku xusan, waa in ay qaadaan ugu yaraan 2 bilood laga bilaabo habka loo marayo dib udajinta cayayaanka ee ku wajahan quudinta xiga.
Baro noocyada ugu badan ee la raadsado ee geraniums qolka.
Calaamadaha bacriminta aan habboonayn
Pelargonium ayaa si muuqata uga fekeraya maqnaansho ama ka badan nafaqooyinka iyo isbedelka muuqaalka marka bacrinta loo isticmaalo si aan sax ahayn, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah ula socoto xaaladda geedka si loo ogaado calaamadaha cilladeysan waqtigooda oo si sax ah uga jawaab. Calaamadaha soo socda ayaa tilmaamaya quudin aan haboonayn:
caleemuhu waxay noqdaan jilicsan oo ay ciriiri noqdaan;
dhirta ayaa sii socota koritaanka;
cidhifyada caleemaha caleenta ah oo qallalan;
Ma jiro ubax;
pelargonium ayaa u muuqda faaqidaad;
Geranium ayaa caleemo saaran.
Waa muhiim! Ma suurtagal in la dalbado bacrimin wax ka badan hal mar asbuucii - tani waxay saamayn ku yeelanaysaa xaaladda nidaamka xididka pelargonium.
Codsiga habboon ee bacarimiso ka dhigaysa ciidda dheriga nafaqada leh nafaqo leh oo faa'iido leh. Waxay kicinaysaa kobcinta dhirta, waxay kor u qaadeysaa barxadda iyo ubax joogto ah, waxayna sidoo kale gacan ka gaysataa ilaalinta muuqaalka quruxda ee ubaxa.